Mobile Kushambadzira muRetail Viwanda | Martech Zone
Nharembozha nekutengesa zvinoramba zvichipa mukana wevatengesi kuvandudza kukosha kwevatengi uye kuwedzera kutendeka - pakupedzisira kutyaira kutengesa. Maitiro akareruka senge SMS mameseji vane zvakanyanya kukanganisa mhinduro. Mimwe mhinduro dzepamberi senge Mobile mafomu inogona kusimudzira ruzivo rwekutenga rwevatengi.
Dynmark iUK-based gore nhare mbozha uye kambani yekutumira mameseji. Vakaisa pamwechete iyi infographic iyo inopa mamwe manhamba akasimba ekutsigira ako ekutengesa ekushambadzira kuedza kuburikidza nekushandisa mobile matekinoroji.
Tags: dynmarkMobile Anwendungmobile marketingnharembozha yekutengesachitoroindasitiri yekutengesakushambadzira kwekutengesaSMSmameseji
Gumiguru 23, 2013 na1: 04 PM
Yakanaka infographic, ndatenda nekuigovera Douglas. Ini ndinonyanya kuwana anobatsira zano rekupedzisira ravanopa pakupedzisira "smart retails will…". Musika wenhare mbozha chokwadi unopa mikana mikuru mune ramangwana kune avo vane hunyanzvi hwekushandisa.